आर्थिक वर्ष सकिएको ८ महिना वित्दा पनि ७२ कम्पनीले गरेनन् साधारणसभा,'क' वर्गका ३० कम्पनी बाँकी :: BIZMANDU
आर्थिक वर्ष सकिएको ८ महिना वित्दा पनि ७२ कम्पनीले गरेनन् साधारणसभा,'क' वर्गका ३० कम्पनी बाँकी
प्रकाशित मिति: Mar 13, 2018 4:24 PM
काठमाडौं। आर्थिक वर्ष सकिएको ८ महिना बितिसक्दा पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीककृत कम्पनीमध्ये ७२ वटाले अझै साधारणसभा सम्पन्न गरेका छैनन्। स्टक एक्सचेन्जको 'क' वर्गमा सूचीकृत कम्पनीकै साधारणसभा हुन बाँकी छ।
नेप्सेले २७ वटै वाणिज्य बैंकलार्इ 'क' वर्गमा सूचीकृत गरेको छ जसमध्ये अझै ९ वटा वाणिज्य बैंकले साधारणसभा गरेका छैनन्। सिद्धार्थ बैंकले चैत ४ गते र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले फागुन ३० गते साधारणसभा डाकेको छ भने अन्य ७ वटाले अझै मिति तय गरेका छैनन्। त्यस्तै क वर्गमा परेको अन्य समूह अन्तर्गतको नागरिक लगानी कोषले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ पछि साधारणसभा गरेको छैन। साधारणसभा सम्पन्न नगर्नेमा बैंक अफ काठमाडौं, सिभिल बैंक, कुमारी बैंक, मेगा बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक, एनएमबी बैंक, प्रभु बैंक छन्।
यस्तै जलविद्युत कम्पनीहरुमध्ये ५ वटा 'क' वर्गमा सूचीकृत छन् त्यसमध्ये बुटवल पावर कम्पनीले साधारणसभा गरेको छैन। १७ वटा बीमा कम्पनीलार्इ नेप्सेले 'क' वर्गमा राखेको छ तर अहिलेसम्म ११ वटाले मात्रै साधारणसभा गरेका छन्। जसमा जीवन बीमा कम्पनीमध्ये प्राइम लाइफले मात्रै गरेको छ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा १० वटाले मात्रै साधारणसभा गरेका छन्।
'क' वर्गमा २६ वटा लघुवित्त रहेका छन्। जसमध्ये मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सले साधारणसभा सम्पन्न गरेको छैन। ११ वटा फाइनान्स क वर्गमा पर्छन् र ती मध्ये श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स, जेबिल्स फाइनान्स, मल्टिपर्पोज फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, पोखरा फाइनान्सले साधारणसभा गर्न सकेका छैनन्।
विकास बैंक अन्तर्गत २१ वटा बैंक क वर्गमा पर्छन् जसमध्ये देवः विकास बैंक, गण्डकी विकास बैंक, हाम्रो विकास बैंक, नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंक, साग्रिल डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंकले अझै साधारणसभा गरेका छैनन्।
माइक्रोफाइनान्समा मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स र नमस्ते वित्तीय संस्थाले साधारणसभा गर्न सकेका छैनन्। ९ वटा फाइनान्सले मात्रै साधारणसभा सम्पन्न गरेका छन् भने बाँकी १२ वटाले गर्न सकेका छैनन्। हाइड्रोपावर तर्फ १७ वटा कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत छन् ति मध्ये ६ वटाले अझै साधारणसभा गर्न सकेका छैनन्। चारवटा होटल मध्ये दुर्इवटाले सम्पन्न गरेका छन् भने तारागाँउले चैत १२ गते तोकेको छ र याक एण्ड यतीको बाँकी छ।
९ वटा जीवन बीमा कम्पनी मध्ये प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्रै गत आर्थिक वर्षको साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ। त्यस्तै १७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी मध्ये १० वटाले मात्रै सम्पन्न गरेका छन्।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा उत्पादन तथा प्रसोधनतर्फ १८ वटा कम्पनी सूचीकृत छन् जसमा ६ वटाले मात्रै साधारणसभा सम्पन्न गरेका छन् जसमा नियमित कारोबार हुने युनिलिभर, बोटलर्स नेपाल तराइ र बोटलर्स नेपाल बालाजु, हिमालयन डिस्टिलरीले भने साधारणसभा सम्पन्न गरेका छन्।
ट्रेडिङ अन्तर्गत बिशाल बजार र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको कारोबार हुन्छ। त्यसमध्ये बिशाल बजारले भने साधारणसभा गरेको छैन।
अन्य उपसूचक अन्तर्गत चारवटा कम्पनी सूचिकृत छन्। जसमा नेपाल फिल्म डेभलपमेन्टको कारोबार हुँदैन तर यसले गत आर्थिक वर्षको साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ। सिटिजन इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्टले भने साधारणसभा गरेको छैन। नेपाल दूरसञ्चार र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले भने साधारणसभा गरेका छन्।
साधारणसभा घोषणा गर्ने हाल १० वटा कम्पनी छन्। जसमा आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चैत १७ गते, वेष्ट फाइनान्स कम्पनीले चैत १४ गते, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चैत १४ गते, तारागाउँ रिजेन्सी होटलले चैत १२ गते, साल्पा विकास बैंकले चैत १० गते तर यो नेप्सेमा सूचिकृत छैन, सिद्धार्थ बैंकले चैत ४ गते, फर्वार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्सले चैत ४ गते, ङादी हाइड्रोपावर कम्पनीले चैत ४ गते, सेञ्चुरी कमर्सिलय बैंकले फागुन ३० गते र नेपाल फाइनान्स लिमिटेडले फागुन २९ गते साधारणसभा डाकेका छन्।
किन हुन्छ ढिला?
बुटवलले पावरले एफपिओ निष्काशनको लागि सधारणसभा गरेको भए पनि गत आर्थिक वर्षको नाफा एफपिओ बापत कायम भएका शेयरधनीलार्इ पनि प्रदान गर्न धितोपत्र बोर्डले निर्देशन गरेपछि सधारणसभा ढिला भएको कम्पनीका जानकारी दियो। त्यै पनि साधारणसभा वर्षमा एक पटक गर्ने हुँदा यसै आर्थिक वर्ष भरीमा गरिसेक्ने कम्पनीले जानकारी दियो।
कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना भित्रमा साधारणभा सम्पन्न गर्नु पर्ने प्रावधान भए पनि बीमा ऐन अनुसार ९ महिना भित्रमा साधारणसरभा सम्पन्न गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ। यसले गर्दा ६ महिनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्न बीमा कम्पनीहरु बाध्य हुँदैनन्।
साधारणभा ढिला गर्दा के हुन्छ?
कम्पनीको संचालक समितिले लाभांश घोषणा गरेपछि त्यसलार्इ साधारणसभाबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीले जति सधारणसभा सम्पन्न गर्न जति ढिला गर्छन् शेयरधनीले लाभांश पनि पाउन पनि त्यतिनै ढिला हुन्छ। ‌जस्तो नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट ७० प्रतिशत लाभांश घोषणा गरिसकेको छ। तर अहिलेसम्म पनि साधारणसभाको मिति घोषणा गरेको छैन। यसले गर्दा शेयर धनीले लाभांश पाउन ढिला हुन्छ।
नेप्सेले सूचीकरण विनियमावली संशोधन गर्दै क वर्गमा सूचीकृत हुनका लागि वासलातसँगै पछिल्लो आर्थिक वर्षको साधारणसभा सम्पन्न भएको हुनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिँदैछन्। संशोधित विनियमावलीको अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड पठाइएको छ।
वाणिज्य बैंक 18 9
विकास बैंक 20 16
फाइनान्स911
माइक्रोफाइनान्स 33 2
हाइड्रोपावर 11 6
जीवन बीमा 1 6
निर्जीवन बीमा 10 5
होटल22
उत्पादन तथा प्रसोधन612
ट्रेडिङ 1 3
आर्थिक वर्ष सकिएको ८ महिना वित्दा पनि ७२ कम्पनीले गरेनन् साधारणसभा,'क' वर्गका ३० कम्पनी बाँकी को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।
जग्गा कारोबारीको बेहाल, किस्ताबन्दीमा दिँदा पनि जग्गा किन्ने ग्राहकनै आएनन्
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मुनाफा तीन अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, स्प्रेड बृद्धिले नाफामा उल्लेख्य सुधार
काठमाडौंको एउटा रुट जहा साना गाडी हटाएर सुविधासम्पन बस सञ्चालनमा,कार्डबाट भाडा तिर्न मिल्ने